အပြည့်အဝမှာ Automatic မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ကျော်သည် 18 ထုတ်ကုန်
ကျော်သည်2ဘီလီယံ
အိတ်ဆောင် Fiber လေဆာက M ...
ကောင်းပြီအရည်အသွေးကောင်းအစက်အပြောက်, optical ပါဝါသိပ်သည်းဆယူနီဖောင်း, တည်ငြိမ် output ကို optical ပါဝါ, ခေတ်ရေစီးကြောင်းစျေးကွက်၏လျှောက်လွှာဝယ်လိုအားနှင့်တွေ့ဆုံ, စက် marking အိတ်ဆောင် Fiber လေဆာ 1. အရည်အသွေးမြင့်ဖိုက်ဘာမီးစက် Features ထုတ်လုပ်; 2. RayFa Self-ဖွံ့ဖြိုးပြီးဒီဂျစ်တယ်မြန်နှုန်းမြင့် galvanometer စကင်နာ, အသေးစားအရွယ်အစား, မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တည်ငြိမ်မှု; စွမ်းဆောင်ရည်နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်အဆင့်ကိုရောက်ရှိ; 3. အစွမ်းထက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်, အမျိုးမျိုးသော application ကိုအညီ processing ဒေတာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ, အထောက်အကူ့ ...
Desktop ကို Fiber လေဆာ ma ...
ကောင်းပြီအရည်အသွေးကောင်းအစက်အပြောက်, optical ပါဝါသိပ်သည်းဆယူနီဖောင်း, တည်ငြိမ် output ကို optical ပါဝါ, ခေတ်ရေစီးကြောင်းစျေးကွက်၏လျှောက်လွှာဝယ်လိုအားနှင့်တွေ့ဆုံ, စက် marking Desktop ကို Fiber လေဆာ 1. အရည်အသွေးမြင့်ဖိုက်ဘာမီးစက် Features ထုတ်လုပ်; 2. RayFa Self-ဖွံ့ဖြိုးပြီးဒီဂျစ်တယ်မြန်နှုန်းမြင့် galvanometer စကင်နာ, အသေးစားအရွယ်အစား, မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တည်ငြိမ်မှု; စွမ်းဆောင်ရည်နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်အဆင့်ကိုရောက်ရှိ; 3. အစွမ်းထက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်, အမျိုးမျိုးသောလျှောက်လွှာ, အထောက်အကူ mu အညီ processing ဒေတာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ ...
desktop အတွက် CO2 လေဆာအမှတ်အသား ...
CO2 laser ဖြတ်တောက်ခြင်း machine
ကောင်းပြီထုတ်လုပ်သစ်သား MDF လေဆာဖြတ်တောက်စက်များအတွက် CO2 လေဆာဖြတ်စက်လေဆာလုပ်သော 1390 ဖြတ်တောက်ခြင်းတိကျသောနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဘို့တိုးတက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်, ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်းမင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုစက်မှုရွေ့လျားမှုထိန်းချုပ်မှုအပြည့်အဝအသုံးပြုမှုကိုမှန်ကန်စေသည်။ ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားထဲမှာတည်ငြိမ်မှု, တိများနှင့်မြန်နှုန်းကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံး software ကိုဒီဇိုင်း, စက်မှုဖွဲ့စည်းပုံ, အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုနှင့်အစိတ်အပိုင်းများရွေးချယ်ရေးကိုရွေးချယ်နိုင်အောင်ကျနော်တို့၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုအတိုင်းငါတို့ဖောက်သည်အစေခံ ...
လက်ကိုင် Fiber လေဆာ w ...
စက်လက်ကိုင်ဌ welding လက်ကိုင်ဖိုင်ဘာလေဆာ ...
ပျံ Fiber လေဆာမာ ...
ကောင်းပြီ machine marking Fiber လေဆာပျံထုတ်လုပ် ...
ပျံ CO2 လေဆာ marki ...
ကောင်းပြီ machi marking Desktop ကို Fiber လေဆာထုတ်လုပ် ...
ကောင်းပြီ CO2 လေဆာဖြတ်စက်လေဆာ engra ထုတ်လုပ် ...
Xintang အဝန်း, Houjie မြို့ Dongguan CITY, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်
Thermometer Gun, Baby Thermometer Clinical, Thermometer Digital, Pulse Oximeter,